Hevitra iPhone | Vaovao IPhone
Ho hitanao eto daholo tsaho momba ny taranaka iPhone manaraka, volavola noforonin'ireo mpankafy iPhone mifototra amin'ny tsirony na amin'ny fiheverana ny tsaho sy tete azo mivezivezy amin'ny Internet. Hiresaka momba ny vaovao mety hitranga amin'ny iPhone ho avy sy izay tianay hampidirina izahay. Rehetra Famolavolana sy hevitra iPhone tsy ofisialy dia manana toerana amin'ity fizarana ity.
Apple manapa-kevitra amin'ny iPhone "clamshell" azo nakambana
ny Toni Cortés hace 3 volana .
Ny iray amin'ireo zavatra mankahala ny olona Cupertino dia ny fanerena azy ireo hamoaka vokatra satria ...
Prototypes iPhone roa azo afindra mandalo fitsapana maharitra maharitra
Mihabetsaka hatrany ny tsaho momba ny maodely azo atao amin'ny iPhone azo ahodina izay hamely ny tsena amin'ny ho avy na ...
Spectacular iPhone 12 Flip hevitra
ny Toni Cortés hace Taona 1 .
Mora tokoa ny misambotra ny nofinao amin'ny efijery informatika. Famolavolana hevitra ho an'ny fitaovana ho avy ankehitriny ...
Ny iPhone 11 dia afaka naka fitaovana hafa
Raha ny filazan'ireo fivoahana nahazo ny bilaogy Japoney Macotakara izay hita taratra amin'ny sary ...
Ny iPhone SE 2 koa dia hanana famolavolana notch
Ny iPhone SE dia iray amin'ireo iPhone tian'ireo mpitsikera indrindra ary, na eo aza ny iray hafa ...
Miseho ny "rendez-vous" izay maka tahaka ny mety ho fisehoan'ny iPhone LCD amin'ny efijery 6,1-inch
ny Ruben gallardo hace 3 taona .
Tsy mahagaga raha - raha tsy misy miova - Apple dia handefa iPhones vaovao amin'ny volana septambra ho avy izao. Na dia amin'ity ...
Ny fandikana mahaliana ny iPhone miolakolaka amin'ny ho avy dia mitondra antsika hiverina any amin'ny Matrix
Andro vitsy lasa izay dia nivoaka ny vaovao fa miasa amin'ny iPhone vaovao miaraka amin'ny efijery i Apple ...
Apple dia afaka mahazo iPhone miaraka amin'ny efijery izay mamaly ny fihetsika nefa tsy mikasika izany ary miolakolaka
ny Nacho Aragonés hace 3 taona .
Ny fihetsika sy ny fomba fifandraisana amin'ireo fitaovana Apple dia niavaka indrindra teo ambonin'ny fifaninanana….
Hevitra video IOS 12 miaraka amina lohahevitra maizina nandrasana hatry ny ela
Isaky ny misy lafin-javatra sasany momba ny fitaovana manaraka izay kasain'ny Apple alefa amin'ny ...
Hevitra voalohany momba ny mety ho endrik'ilay iPhone X Plus
Rehefa nanomboka niparitaka ny tsaho voalohany momba ny mety ho endrik'ilay iPhone manaraka, dia taranaka ...
Ny tsaho rehetra nanomboka tamin'ny Mey tamin'ny famoahana tokana ny iPhone 8
ny Angel Gonzalez hace 4 taona .
Ora vitsy lasa izay dia nampahafantatra anao izahay fa ny kaody firmware an'ny HomePod dia nanambara ny mety amboaran'ny iPhone vaovao ...